नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पुस्तक आयो - Naya Sanchar
Wednesday, October 20, 2021 | ३ कार्तिक २०७८, बुधबार
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पुस्तक आयो
२१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ११:३७
नयाँ सञ्चार संवाददाता
चितवन । यहाँका विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अघिल्लो वर्षको नतिजा तयारी गर्दै गर्दा पाठ्यपुस्तक आइसकेको छ । आगामी असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू गर्ने तयारीमा यहाँका विद्यालय छन् ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भरतपुरका निमित्त प्रमुख केदारराज बिष्टका अनुसार अहिले यस केन्द्रमा कक्षा ४ देखि ११ सम्मका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक आइसकेका छन् ।
उहाँका अनुसार केन्द्रमा अहिले १४ लाख ३५ हजार ९१८ थान पुस्तक आइसकेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “कक्षा ६ मा तीन विषयमा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएकाले आउन बाँकी रहेको छ, ती पुस्तक पनि यही जेठ २३ गते आइतबारसम्म आइपुग्ने छन् ।”
पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएका सामाजिक, विज्ञान र स्वास्थ्य विषयका पुस्तक आउने क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । तीन विषयका ७५ हजार किताब आउन बाँकी रहेको हो ।
यस केन्द्रले चितवनसहित बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, बर्दघाट–सुस्ता पूर्व नवलपरासी, बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम नवलपरासी, तनहुँ र गोरखा जिल्लामा पुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा १२ को पुस्तक पनि जनक शिक्षाले नै वितरण गर्ने
ती जिल्लाका ३४ व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सूचीकृत गरिसकेको र अन्य पनि सूचीकृत तथा नवीकरण हुन आउने क्रम जारी रहेको बिष्टले बताउनुभयो । कोरोना कहरका कारण मुलुकको अवस्था सामान्य बनेर पठनपाठन पुनः सञ्चालन भएमा किताबको अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ ।
केन्द्रले कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएकाले केन्द्रले वितरण नगर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा १२ को पुस्तक पनि जनक शिक्षाले नै वितरण गर्नेछ । अहिले केन्द्रको भरतपुर शाखामा रु १२ करोड ७९ लाख ९४ हजार ४९४ का पुस्तक आइसकेका छन् ।
जिल्लामा हाल कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको कूल सङ्ख्या एक लाख ५० हजारभन्दा बढी रहेको छ । त्यसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ७५ हजार ३३९ विद्यार्थीका लागि यस केन्द्रले पुस्तक पुर्याउने छ भने संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निजी क्षेत्रले पुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रले आइसकेका पुस्तक यही जेठ २४ गतेदेखि वितरणको प्रक्रिया सुरू गर्ने जनाएको छ ।
सम्बन्धित सामग्री भेटिएन
घट्याे आज सुनचाँदीकाे मूल्य, कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
दाङमा विस्तार हुँदैछ, कागती खेती
थपिए एक हजार ९६ काेराेना संक्रमित, १२ जनाको निधन
२ कार्तिक २०७८, मंगलवार २०:३४
बाढीमा फसेका ५ जनाको २२ घण्टापछि सेनाद्वारा उद्धार
२ कार्तिक २०७८, मंगलवार २०:१७
नेपाललाई थप २० लाख मात्रा खोप अनुदान दिने चीनको घोषणा
२ कार्तिक २०७८, मंगलवार १९:२२
सुदूरपश्चिममा अविरल वर्षा: तीन जनाको मृत्यु, जनजीवन अस्तव्यस्त
२ कार्तिक २०७८, मंगलवार १९:०७
दुई मौसम प्रणाली एकैसाथ सक्रिय हुँदा ठूलो वर्षा, सुदुरपश्चिम बढी प्रभावित
२ कार्तिक २०७८, मंगलवार १८:१८
‘मायाले नै हाे पियारा’ (भिडियाे)
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:२९
“प्रेमको चिनो“ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
७ बैशाख २०७८, मंगलवार १५:२७
चलचित्र ‘रिभेन्ज’को ‘हजारौं हजारमा’ गीत सार्वजनिक(भिडियाे)
७ बैशाख २०७८, मंगलवार १४:५५
अफ्रिकी महिलाको स्वरमा ‘फूलबुट्टे सारी’
९ चैत्र २०७७, सोमबार १७:३६
सुचना विभाग दर्ता नं: १८६४/०७६-७७ Connect Media & Advertising (P)Ltd.
Phone: 9803520707, 9860923282
सम्पूर्ण समाचारमूलक सामग्रीका लागि:
Phone: 9803520707, 9818002564
संवाददाता: मिका विशुन्के